Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Umzobi kaThixo uRaphael ngoku ubuyiselwe ebomini
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
I-Italiya kufuneka ifumane ibhaso lokomelela kubhubhani we-COVID-19. Ukuzimisela kwelizwe ukoyisa le ngxaki yobhubhane, ukuthobela imiyalelo yezonyango, kunye nokuthembela kwisayensi kube neziqhamo.
namhlanje, I-Itali, inkokeli phakathi kwamazwe aseYurophu njengoko ingaphantsi kwemilinganiselo emitsha yothintelo, iyakwazi ukuphinda iphakamise iziganeko ezibekwe kwindawo yokulinda.
Phakathi kwezi kukho umsitho onikezelweyo Raphael ngesikhumbuzo seminyaka engama-500 yokusweleka kwakhe (1520-2020), egutyungelwe kunyaka ophelileyo yimeko kaxakeka ye-coronavirus.
Ubuhle kunye nobukhazikhazi benkulungwane yeshumi elinesihlanu iPalazzo della Cancelleria (indawo engaphandle ye-Holy See entliziyweni yeRoma yamandulo) phakathi kweyona mizekelo ibalaseleyo yoyilo lweRenaissance yaseRoma, iya kubamba umsitho wangokuhlwa onikezelwe "kuMzobi oNgcwele" - ubugcisa. kunye nobomi bukaRafael,
Umbhali-mbali wezobuGcisa uMirko Baldassarre, okwangumgcini wesikhokelo sobugcisa, uya kuxela kwaye abonise ezinye zemisebenzi yobugcisa ebalaseleyo yomzobi wase-Urbino, edibanisa iimbekiselo kunye nokuphinda enze ezinye zezona ziqendu zicacileyo nezibalulekileyo zobomi bakhe obufutshane nobunzulu. .
Ingxelo kaMaestro Baldassarre, eyahlulahlulwe yaba zizenzo ezithathu, iya kuphawulwa ngokudlalwa kweengcezu zomculo nguWolfang Amadeus Mozart, uFranz Joseph Haydin, uJohan Sebastian Bach, kunye noAntonio Vivaldi. Iziqwenga ziya kwenziwa yi-quartet ye-Aurora kunye ne-Rinaldi yentambo ephuculwe ngokuboniswa kweefilimu ezintathu (i-Urbino-Rome-Florence) ehlelwe ngumenzi wevidiyo uMattia Enrico Rinaldi kunye nemifanekiso yemisebenzi echazwe ngumbhali-mbali wezobugcisa.
Umcimbi, kunye nesiqalo sayo izolo ngoNovemba 19, iphinda iqhube ngoNovemba 20, 26 kunye ne-27 kaNovemba kwaye iya kuqhutyelwa eAula Magna yesihlalo sembali yeChancellery yePostile (ekuvuleni okukhethekileyo), esabamba iinkundla namhlanje, kwaye I-Holy See: i-Apostolic Penitentiary, i-Apostolic Signatura (i-dicastery yeCuria yaseRoma kwaye yinkundla ephakamileyo yomthetho we-canon we-Holy See) kunye neRota yaseRoma.
Ngaphambi kokuqala kwesi siganeko, abathathi-nxaxheba baya kuvunyelwa ukuba batyelele "igumbi leentsuku ezingamashumi amabini" elihloniphekileyo kunye neefrescoes ezipeyintiweyo nguGiorgio Vasari kwi-1546 (iziqendu ezivela kwi-pontificate kaPapa uPaul III Farnese).